အင်္ဂလိပ်လို Romantic ဆန်ဆန်ပြောနိုင်ဖို့ အချစ်အကြောင်း အီဒီယံ ၁၀ မျိုး - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်လို Romantic ဆန်ဆန်ပြောနိုင်ဖို့ အချစ်အကြောင်း အီဒီယံ ၁၀ မျိုး
Posted by Soe Soe Win on February 16, 2015 at 11:11 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Valentine နမှေ့ာလညျး ပြျောခဲ့ကွပွီးပွီ romantic လညျး ဖွဈခဲ့ကွပွီးပွီ ဆိုတော့ ကွညျနှုးခဲ့တာ လေးတှကေို ပွနျတှေးရငျး အင်ျဂလိပျလို romantic ဖွဈဖို့ love အီဒီယံ ၁၀ မြိုးကို လလေ့ာလိုကျရအောငျ။
၁။ A match made in heaven - နနေဲ့လ၊ ရှနေဲ့မွလို အတှဲညီပွီး ပြျောရှငျဖှယျ ဘဝတဈခုကို တညျဆောကျ ဖွတျသနျး ကွမယျလို့ ဆိုလိုတာပေါ့။ (ဘဝ လကျတှဲဖျေါကို ကံကွမ်မာက နဂိုကတညျးက သတျမှတျပွီးသား လို့ ဆိုလိုပါတယျ။)
We areamatch made in heaven. Let’s get married.
၂။ To fall head over heels in love - လုံးဝကို ခဈြမိနပွေီတဲ့။ ကိုယျ့အောကျက ကမ်ဘာမွကွေီးတောငျ ပြောကျသှားပွီး ဂြှမျးပွနျသှားလောကျအောငျကို ခဈြမိသှားပွီတဲ့။
He has fallen head over heels in love with Jane.
၃။ To be smitten with someone - အစှဲကွီးစှဲမိနပွေီ။ အခဈြလှောငျအိမျမှာ ပိတျမိနပွေီတဲ့။ စားလဲဒီစိတျ၊ သှားလဲဒီစိတျ၊ ဘယျလိုမှ မလေို့ မရဘူးတဲ့။
Sally is smitten with this Gary chap she met the other day. She can’t stop talking about him.
၄။ To be the apple of someone’s eye - ဒါကတော့ အခဈြခံရတာကို ပွောတာ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ မိဘတှရေဲ့ အခဈြကို ခံရတာကို ပွောတာ။
Yasmin can do no wrong. She is the apple of her father’s eye.
၅။ To beasoul mate - တဈယောကျရဲ့ အတှငျးစိတျ ခံစားခကျြတှကေို တဈယောကျက ကောငျးကောငျး သိတယျ။ နှဈကိုယျ့တဈစိတျလိုို့ပွောမလားဘဲနျော။
၆။ To take one’s breath away - အသကျရှုတောငျ ရပျသှားလောကျအောငျ လှလှနျးလို့၊ မွငျမွငျခငျြး သိပျသိပျ ခဈြမိသှားပွီတဲ့။ ပိုပွီး romantic ဖွဈသှားအောငျ Berlin ရဲ့ သီခငျြးလေး “Take my breath away” ပါနားထောငျလိုကျပါဦး။
You are so beautiful that you take my breath away.
ရ။ To be someone’s one and only - တဈယောကျဆို တဈယောကျ၊ ပိတောကျဆို ပိတောကျ ပါဘဲတဲ့။ မငျးကလေးက ကိုယျ့အတှကျ အနှိုငျးမဲ့ပါဘဲပေါ့။
၈။ To haveacrush on someone - အရူးအမူး ခဈြမိနပွေီ။ ဒီ အခွအေနကေ teenage တှေ စိတျကစားတဲ့ အရှယျမှာ ဖွဈလရှေိ့တဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ အပျေါ စိတျဝငျစားတဲ့ အရှယျမှာ ဖွဈလရှေိ့တဲ့ စှဲလမျးမှုပါ။
Sally has hadacrush on James since they were at university together. He doesn’t realise this.
၉။ To fancy someone - ဒါကရိုးရိုး ဗွိတိသြှ အင်ျဂလိပျအချေါအဝျေါ ဖွဈတဲ့ ကွိုကျတယျလို့ အိန်ဒွရေရ ပွောတဲ့ အသုံးပါဘဲ။
My friend really fancies you.
၁၀။ To love someone with all of one’s heart and soul - ဒါကတော့ အသညျးနှလုံးရော၊ ဝိဉာဉျရောပုံပွီးခဈြတယျလို့ ကဗြာဆနျဆနျလေးပွောတာပါ။
John loves Leslie with all his heart and soul.
ကဲ…. ဒါတှကေတော့ အခဈြနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အီဒီယံ တဈခြို့ပါ။ နောကျထပျလဲ စာဖတျသူတို့ သိတဲ့ဟာတှေ အမြားကွီးရှိဦးမှာပါ။ ပွီးတော့…သုံးလဲသုံးဖူးကွမှာပါနျော။ လူသားတှမှော နှလုံးသားရှိကွတာမို့ ခဈြတတျတာ အပွဈမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ တှေးချေါတတျဖို့ ဦးနှောကျလညျး ရှိတာမို့ အမှားအမှနျကို သုံးသပျဆငျခွငျပွီး လမျးမှားမရောကျအောငျ နတေတျဖို့ သတိလကျဆောငျလညျး ပေးလိုကျပါတယျနျော။ အားလုံးခဈြတတျကွပါစေ။
Englishwithatwist.com မှ Shanthi ရဲ့ How to be romantic in English မှ ကိုးကားဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
မူရငျးဆောငျးပါးကို ဒီ link (http://englishwithatwist.com/2014/02/11/how-to-be-romantic-in-engli...) တှငျ သှားရောကျဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Valentine နေ့မှာလည်း ပျော်ခဲ့ကြပြီးပြီ romantic လည်း ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးပြီ ဆိုတော့ ကြည်နှုးခဲ့တာ လေးတွေကို ပြန်တွေးရင်း အင်္ဂလိပ်လို romantic ဖြစ်ဖို့ love အီဒီယံ ၁၀ မျိုးကို လေ့လာလိုက်ရအောင်။
၁။ A match made in heaven - နေနဲ့လ၊ ရွှေနဲ့မြလို အတွဲညီပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက် ဖြတ်သန်း ကြမယ်လို့ ဆိုလိုတာပေါ့။ (ဘဝ လက်တွဲဖေါ်ကို ကံကြမ္မာက နဂိုကတည်းက သတ်မှတ်ပြီးသား လို့ ဆိုလိုပါတယ်။)
၂။ To fall head over heels in love - လုံးဝကို ချစ်မိနေပြီတဲ့။ ကိုယ့်အောက်က ကမ္ဘာမြေကြီးတောင် ပျောက်သွားပြီး ဂျွမ်းပြန်သွားလောက်အောင်ကို ချစ်မိသွားပြီတဲ့။
၃။ To be smitten with someone - အစွဲကြီးစွဲမိနေပြီ။ အချစ်လှောင်အိမ်မှာ ပိတ်မိနေပြီတဲ့။ စားလဲဒီစိတ်၊ သွားလဲဒီစိတ်၊ ဘယ်လိုမှ မေ့လို့ မရဘူးတဲ့။
၄။ To be the apple of someone’s eye - ဒါကတော့ အချစ်ခံရတာကို ပြောတာ။ ပုံမှန်အားဖြင့် မိဘတွေရဲ့ အချစ်ကို ခံရတာကို ပြောတာ။
၅။ To beasoul mate - တစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ် ခံစားချက်တွေကို တစ်ယောက်က ကောင်းကောင်း သိတယ်။ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်လိုို့ပြောမလားဘဲနော်။
၆။ To take one’s breath away - အသက်ရှုတောင် ရပ်သွားလောက်အောင် လှလွန်းလို့၊ မြင်မြင်ချင်း သိပ်သိပ် ချစ်မိသွားပြီတဲ့။ ပိုပြီး romantic ဖြစ်သွားအောင် Berlin ရဲ့ သီချင်းလေး “Take my breath away” ပါနားထောင်လိုက်ပါဦး။
ရ။ To be someone’s one and only - တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်၊ ပိတောက်ဆို ပိတောက် ပါဘဲတဲ့။ မင်းကလေးက ကိုယ့်အတွက် အနှိုင်းမဲ့ပါဘဲပေါ့။
၈။ To haveacrush on someone - အရူးအမူး ချစ်မိနေပြီ။ ဒီ အခြေအနေက teenage တွေ စိတ်ကစားတဲ့ အရွယ်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အပေါ် စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရွယ်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ စွဲလမ်းမှုပါ။
၉။ To fancy someone - ဒါကရိုးရိုး ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်အခေါ်အဝေါ် ဖြစ်တဲ့ ကြိုက်တယ်လို့ အိနြေ္ဒရရ ပြောတဲ့ အသုံးပါဘဲ။
၁၀။ To love someone with all of one’s heart and soul - ဒါကတော့ အသည်းနှလုံးရော၊ ဝိဥာဉ်ရောပုံပြီးချစ်တယ်လို့ ကဗျာဆန်ဆန်လေးပြောတာပါ။
ကဲ…. ဒါတွေကတော့ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံ တစ်ချို့ပါ။ နောက်ထပ်လဲ စာဖတ်သူတို့ သိတဲ့ဟာတွေ အများကြီးရှိဦးမှာပါ။ ပြီးတော့…သုံးလဲသုံးဖူးကြမှာပါနော်။ လူသားတွေမှာ နှလုံးသားရှိကြတာမို့ ချစ်တတ်တာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တွေးခေါ်တတ်ဖို့ ဦးနှောက်လည်း ရှိတာမို့ အမှားအမှန်ကို သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီး လမ်းမှားမရောက်အောင် နေတတ်ဖို့ သတိလက်ဆောင်လည်း ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အားလုံးချစ်တတ်ကြပါစေ။
Englishwithatwist.com မှ Shanthi ရဲ့ How to be romantic in English မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီ link (http://englishwithatwist.com/2014/02/11/how-to-be-romantic-in-engli...) တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Nyi Lwin on July 23, 2015 at 8:34
Permalink Reply by Hsuwai Hlaing on September 20, 2015 at 11:47